के छ, कांग्रेसको १८ बुँदे आर्थिक नीतिमा ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
के छ, कांग्रेसको १८ बुँदे आर्थिक नीतिमा ?
Financial policy of Congress
नेपाली कांग्रसले समग्र आर्थिक नीति केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत पश्चात पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनीक गरेको छ । अबको दिनमा कांग्रेसको आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा सह-महामन्त्री तथा समितिका संयोजक डा प्रकाशशरण महतले बुधबार जानकारी दिए । कांग्रेसको समग्र आर्थिक नीति प्रजातान्त्रिक समाजबादी आवधारणा अनुरुप रहने संयोजक महतले बताए ।